Mma agha ga-abụzi mma ogè (3)
‘Anyị ga na-aza aha Jehova’ (5)
Zayọn ga-esi ike ma ọ maliteghachi ịchị (6-13)
4 N’oge ikpeazụ,Ugwu nke ụlọ Jehova dị n’elu ya+Ga-akwụsi ike n’ebe dị elu karịa ugwu ukwu niile. A ga-ebulikwa ya ka ọ dị elu karịa ugwu nta niile. Ndị dị iche iche ga-enurukwa na-agbago na ya.+ 2 Ọtụtụ mba ga-ejekwa, sị: “Bịanụ ka anyị gbagoo n’ugwu Jehova,Gbagookwa n’ụlọ Chineke Jekọb.+ Ọ ga-akụziri anyị ụzọ ya. Anyị ga-ejekwa ije n’ụzọ ya.” N’ihi na a ga-esi na Zayọn nye iwu,*Sikwa na Jeruselem kwuo ihe Jehova kwuru. 3 Ọ ga-ekpere ọtụtụ ndị ikpe,+Doziekwara mba ndị siri ike, ndị dị n’ebe dị anya, okwu ha. Ha ga-akpụgharị mma agha ha ka ha bụrụ mma ogè,Kpụgharịakwa ube ha ka ha bụrụ mma e ji akwa osisi.+ Mba agaghị eweli mma agha lụso mba ọzọ agha. Ha agaghịkwa amụ otú e si alụ agha.+ 4 Onye ọ bụla n’ime ha ga-anọdụ ala n’okpuru osisi vaịn ya nakwa n’okpuru osisi fig ya.+ E nweghịkwa onye ga-emenye ha ụjọ,+N’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha* ekwuola ya. 5 N’ihi na ndị dị iche iche ga na-aza aha* chi ha. Ma, anyịnwa ga na-aza aha* Jehova bụ́ Chineke anyị+ ruo mgbe niile ebighị ebi. 6 Jehova kwuru, sị: “N’ụbọchị ahụ,M ga-achịkọta ndị na-ete ụkwụ. M ga-akpọkọta ndị a chụsasịrị achụsasị,+Kpọkọtakwa ndị m mesiri ike. 7 M ga-eme ka ndị ahụ na-ete ụkwụ fọdụ,+Meekwa ka ndị ahụ a chịgara ebe dị anya bụrụ mba dị ike.+ Mụnwa bụ́ Jehova ga-esikwa n’Ugwu Zayọn na-achị ha,Malite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. 8 Ma gịnwa, ụlọ nche nke ndị na-azụ atụrụ,Ugwu Zayọn,+Ị ga-amaliteghachi ịchị n’alaeze mbụ,+Alaeze nke dịbu na Jeruselem.+ 9 Gịnịzi mere i ji na-etisi mkpu ike? Ọ̀ bụ na i nweghị eze,Ka ọ̀ bụ na onye ndụmọdụ gị anwụọla,Nke mere ahụ́ ji na-afụ gị ụfụ dị ka nwaanyị ime na-eme?+ 10 Ndị bi na Zayọn, ahụ́ ga-afụ unu ụfụ, unu ga-etikwa mkpu ákwáDị ka nwaanyị ime na-eme,N’ihi na unu ga-esi n’obodo pụọ gaa biri n’ọhịa. Unu ga-erukwa Babịlọn.+ Ọ bụ ebe ahụ ka a ga-anapụta unu.+ Ọ bụ ebe ahụ ka Jehova ga-agbapụta unu n’aka ndị iro unu.+ 11 A ga-achịkọta ọtụtụ mba ịlụso unu agha,Ha ga-asị, ‘Ka e merụọ Zayọn, Ka anya anyị hụkwa mgbe ihe a ga-eme ya.’ 12 Ma, ha amaghị uche Jehova. Ha aghọtaghịkwa nzube ya. N’ihi na ọ ga-achịkọta ha dị ka ùkwù ọka* a ka gbutere egbute, nke e bu na-aga n’ebe a na-azọcha ọka. 13 Ndị bi na Zayọn,* bilienụ zọchaa mkpụrụ,+N’ihi na m ga-agbanwe mpi unu ka ọ bụrụ ígwè. M ga-agbanwekwa ọbụ ụkwụ unu ka ọ bụrụ ọla kọpa. Unu ga-egwerikwa ọtụtụ ndị.+ Unu ga-enye Jehova uru ha ji aghụghọ rite,Nyekwa Onyenwe ụwa niile akụ̀ ha.”+
^ Na Hibru, “ọnụ Jehova nke ụsụụ ndị agha.”
^ Na Hibru, “ga na-ejegharị n’aha.”